Kuuraya Kiriputonayiti Bhuku rekuteerera - Cloud Library
Pamba - Zvekuteerera - Kuuraya Kiriputonayiti Bhuku rekuteerera
Rukova Kuuraya Kiriputonayiti Bhuku rekuteerera
Ridza Nheuri (7 MB)
Ridza Chitsauko 1 (21 MB)
Ridza Chitsauko 2 (22 MB)
Ridza Chitsauko 3 (19 MB)
Ridza Chitsauko 4 (20 MB)
Ridza Chitsauko 5 (21 MB)
Ridza Chitsauko 6 (23 MB)
Ridza Chitsauko 7 (23 MB)
Ridza Chitsauko 8 (19 MB)
Ridza Chitsauko 9 (22 MB)
Ridza Chitsauko 10 (30 MB)
Ridza Chitsauko 11 (25 MB)
Ridza Chitsauko 12 (22 MB)
Ridza Chitsauko 13 (20 MB)
Ridza Chitsauko 14 (22 MB)
Ridza Chitsauko 15 (25 MB)
Ridza Chitsauko 16 (24 MB)
Ridza Chitsauko 17 (20 MB)
Ridza Chitsauko 18 (22 MB)
Ridza Chitsauko 19 (28 MB)
Ridza Chitsauko 20 (27 MB)
Ridza Chitsauko 21 (27 MB)
Ridza Chitsauko 22 (26 MB)
Ridza Chitsauko 23 (27 MB)
Ridza Chitsauko 24 (23 MB)
Ridza Chitsauko 25 (27 MB)
Ridza Chitsauko 26 (23 MB)
Ridza Chitsauko 27 (27 MB)
Ridza Chitsauko 28 (30 MB)
Unokwanisa Kuparadza Chinokubira Simba Rako
Sezvinoita Superman, anokwanisa kusvetuka pamusoro pechipingaidzo nekukunda muvengi wese, vateveri vaKristu vanesimba rechikuriri rekukunda zvinetso zvatinowona. Asiwo dambudziko kuzviviri izvi Superman nesu nderekuti kune svetasimba (kryptonite) inotibira masimba edu.
Naizvozvo, pazviviri Superman neKryptonite ndezvefungidziro. Asi kryptonite yepamweya haisi.
Bhuku rino rinopa mhinduro yekuti sei vazhinji vedu vasisakwanise kunzwa simba rehutsvene raiwonekwa pakati pemaKristu enguva yemuzana ramakore ekutanga.
Muna-Kuuraya Kryptonite, John Bevere anoburitsa pachena kuti mhedzasimba (Kryptonite) chii, nemhaka yei irikumbunyikidza nharaunda dzedu, uye kuti tingasununguka sei kubva muutapwa hwayo.
Hazvisi zvemwoyo wehutera, Kuuraya Kryptonite ndozvose, asi mutakunanzva wepamusoro wemweya. Ichi ndicho chokwadi chinogozha kumuteveri waKristu wese anodokwairira kugamuchira nzira inezvinetso asi iinemubayiro weshanduko yakakwana.
Dhawunirodha zvese: ~643.13 MB
Mamwe mabhuku emuchidzidzo chino: